Bawotha ubomvu abafundi baseMphophomeni | News24
Bawotha ubomvu abafundi baseMphophomeni
ISITHOMBE:SITHUNYELWE Abafundi besikole samabanga aphezulu iMpophomeni bathi basovalweni njengoba bezozithola befeyila uma isikole siqhubeke njalo nokubanqabela ukuthi babhale izifundo zabo.
BADINWE bagane unwabu abafundi kanye nabazali besikole samabanga aphezulu iMpopheni ngokwenqatshelwa ukuthi babhale izivivinyo zokuphela konyaka ngoba omunye wothisha ethe lokhu kuyisijeziso sabo.
Lokhu kwenzeke ekuqaleni kweyanga uLwezi lapho abafundi bebuyela esikoleni emva kohambo lwesikole zingu 29 kuMfumfu. Abafundi abayi-10 bebanga le-10 (Grade 10) bathi abazange babhale i-Economics, English ne-Life Orientation emva kokuba omunye wothisha ethe bangamahlongandlebe emva kokubahamba lolu hambo ngetekisi esikhundleni sokuthi sebhasi lesikole elabe liqashiwe.
Ngokuchaza komunye wabafundi ongazange afune ukudalulwa futhi ongomunye wabafundi abanqatshelwe ukubhala uthe ngosuku okwakuhanjwa ngalo esikoleni babebhala isivivinyo se-Life Sciences. Uqhube wathi bona babe sebekhuluma nomunye wothisha bacela ukuthi baqashe itekisi ababezohamba ngalo ukuya eThekwini ngenxa yokuthi babebhala ngalolo suku. Uthe kwavunyelwana uthisha lona.
”Nangempela emva kokubhala saqonda emakhaya sahamba sayoshintsha sangawugqoka umfaniswano ngoba vele kwase kuvunyelwene nothisha. Sahamba sabuya ngoMsombuluko, okuyilapho omunye wothisha wasitshela ukuthi sephule umthetho ngakho-ke kuzomele sijeze... ngeke size sibhale izivivinyo zethu ezazisele. Waqala wasishanelisa ikilasi ngemishanelo emifishane. Samazisa ukuthi akushaneleki ngoba imishanelo yabe imifishane kodwa waqhubeka wathi asiqhubeke sishanele. Sathi sisabheke lokho sabe sesitshelwa ukuthi ngeke size sibhale ngoba sibe amahlongandlebe,” kusho lo mfundi.
Uthishanhloko wesikole uMnu Ralph Mpisane uthe laba fundi bephule umthetho wesikole ngokuzenzela olwabo uhambo oluya eThekwini ngale kokugunyazwa esikoleni.
“Into eyenzeka ukuthi bahlela olwabo uhambo ngosuku olulodwa nolwesikole. Bafika eThekwini baphuza utshwala badakwa baphambana nomthetho wesikole. Sabiza abazali babo emhlanganweni bamiswa esikoleni base betshelwa ukuthi uma beqeda isigwebo sabo sokumiswa bazobe sebebizwa ukuzobhala. Abanye babo babuyile bazobhala, kuphela kunedlanzana nje elingazange libhale kanti futhi ileli dlanzana labafundi abahluphayo,” kusho uMpisane.
Omunye wabazali uthe baya esikoleni bancenga ukuthi abafundi banikwe ithuba lokubhala. “Esikufisayo ukuthi izingane zethu zibhale ngoba uma zingabhali zizofeyila.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMnu Muzi Mahlambi uthe kumanje baphezu kwalo udaba lalaba bafundi.
“Siwumnyango siyalulungisa udabba lwabo kanti futhi siyakuveza ukuthi abafundi baphule umthetho ngokuhamba bengafake mfaniswano. Sizodinga ukuthola futhi nakubazali ukuthi sazi ukuthi ngabe bayithathephi imali yokuziqashela eyabo itekisi. Okokungabhali kwabo siyakulungisa kumanje.”